Manchester United Oo 3-0 ugu awood sheegatay Saint-Etienne +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Manchester United Oo 3-0 ugu awood sheegatay Saint-Etienne +SAWIRRO
Manchester United ayaa guul 3-0 ah ka gaartay kooxda Saint-Etienne lugta koowaad ee tartanka Europa League wareegiisa 32 da kadib sadexleey uu u dhaliyay Zlatan Ibrahimovic.
Laad xor ahaa oo lasii taabtay oo uu rubac saac markii ay socotay ciyaarta ayuu kooxdiisa hogaanka ugu dhiibay isagoo qeybtii danbena dhaliyay labo gool oo kale oo mid uu ahaa gool ku laad, guusha ay ku gaareen Old Trafford ayaana gacan ku heyn buuxda ugu filan ka hor kulanka lugta labaad ee ay aadi doonaan France axada soo aadan.
Ciyaarta ayaa xamaasad gaar ah u laheyd walaalaha Paul iyo Florentin Pogba oo markii ugu horeysay kulan sidaan u xamaasad leh isaga hor imaanayay, waana kulankii koowaad ee AFAR kulan oo xiriir ah oo ay United ciyaari doonto toban maalmood gudahood, si kasta, Jose Mourinho ayaa kulankaan u soo xushay koox adag.
Ibrahimovic ayaa daqiiqadii 15aad dhaliyay goolkiisii 21 aad ee xili ciyaareedkaan laakin Saint-Etienne ayaa marwaliba u muuqatay kuwo halis ku ah United ka hor inta aysan United dilin ciyaarta kadib gool labaad uu dhaliyay inkastoo gool kale laga diiday xidiga ree Sweden, Anthony Martial ayaa isna qasaariyay fursado fiican.
Paul Pogba ayaa birta garaacay halka Nolan Roux uu kooxdiisa ka qasaariyay fursad dahabi ah, Ibrahimovic ayaase ahaa geesigii ciyaarta isagoo dhaliyay daqiiqadii 87aad ee ciyaarta goolkiisii sadexaad si uu quusiyo kooxda ree France.
United ayaa arbacada marka ay saacada bartamaha qaarada yurub tahay 6:30 ama 8:30 geeska afrika lasoo ciyaari doonta Saint-Etienne.